Hamro Yatra | » लकडाउन पालना गराउन ‘भूत’ परिचालन ! लकडाउन पालना गराउन ‘भूत’ परिचालन ! – Hamro Yatra
> लकडाउन पालना गराउन ‘भूत’ परिचालन !
लकडाउन पालना गराउन ‘भूत’ परिचालन !
२ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोक्न विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउन गरेका छन् । तर लामो समयसम्म लकडाउन पालना गराउन सजिलो छैन ।
इन्डोनेसियाको केपुह गाउँमा भने लकडाउन पालना गराउन अनौठो जुक्ति निकालेको छ ।
पछिल्लो केही समययता जुनेली रातमा सेता ‘भूत’हरु सडकमा देखिन थालेको द साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले जनाएको छ । जाभा टापुमा अन्धविश्वास मान्ने मानिसरुलाई घरमा नै राख्न स्वयंसेवकहरुलाई ‘भूत’को रुपमा परिचालन गरिएको छ ।
सामाजिक दूरी कायम राख्न प्रहरीसँग मिलेर यो योजना ल्याइएको गाउँको युवा समूहका प्रमुख अन्जर पंकानिङटिएस बताउँछन् । उनीहरुले ‘पोकोङ’ को प्रयोग गरेर मानिसलाई घरबाट निस्किन डर देखाइरहेका छन् । इन्डोनेसियामा पोकोङ मानिसको ‘भूत’को प्रतीक हो ।
तर धेरैले सामाजिक दूरी कायम गर्न मानिरहहेका छैनन् । मानिसमा कोरोना भाइरसबारे चेतना नभएकाले पनि घरमा नै राख्न कठिन भइरहेको अभियान्ताहरु बताउँछन् ।